ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြား ကန်စစ်သင်္ဘော ဖြတ်သန်းမှု တရုတ်ကန့်ကွက် ( ခြိမ်းခြောက်မှန်သမျှကို သာကောတို့ တုန့်ပြန်ဖို့ အသင့်ရှိတယ်လို့ ကြုံးဝါးလိုက်ပါပြီ….) – New Of Burmese
ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြား ကန်စစ်သင်္ဘော ဖြတ်သန်းမှု တရုတ်ကန့်ကွက် ( ခြိမ်းခြောက်မှန်သမျှကို သာကောတို့ တုန့်ပြန်ဖို့ အသင့်ရှိတယ်လို့ ကြုံးဝါးလိုက်ပါပြီ….)
တိုငျဝမျရလေကျကွားကနေ အမရေိကနျ စဈသင်ျဘောကွီး ၂ စငျး ဖွတျသနျးမောငျးနှငျခဲ့တဲ့ လုပျရပျဟာ ဒသေတှငျးငွိမျးခမျြးရေးနဲ့ တညျငွိမျရေးကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး အနှောကျအယှကျပေးရာရောကျကွောငျး တရုတျနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ပွောခှငျ့ရ Wang Wenbin က ကွာသပတေးနေ့ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ ပွောပါတယျ။
“အမရေိကနျစဈသင်ျဘောတှေ တိုငျဝမျရလေကျကွားကို ဖွတျသှားတာကို သိရှိရပွီး ဒါကို တရုတျအစိုးရက အနီးကပျစောငျ့ကွညျ့နသေလို လုံးဝ ကနျ့ကှကျကွောငျးလညျး Mandarin ဘာသာနဲ့ပွောသှားတာပါ။ ဒါ့အပွငျ ဘယျလို ခွိမျးခွောကျ ရနျစမှု မြိုးကို မဆို တုနျ့ပွနျဖို့ အသငျ့ရှိကွောငျးလညျး ပွောပါတယျ။
တိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားကနေ အမေရိကန် စစ်သင်္ဘောကြီး ၂ စင်း ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်ခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ ဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ တည်ငြိမ်ရေးကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး အနှောက်အယှက်ပေးရာရောက်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရ Wang Wenbin က ကြာသပတေးနေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောပါတယ်။
“အမေရိကန်စစ်သင်္ဘောတွေ တိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားကို ဖြတ်သွားတာကို သိရှိရပြီး ဒါကို တရုတ်အစိုးရက အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေသလို လုံးဝ ကန့်ကွက်ကြောင်းလည်း Mandarin ဘာသာနဲ့ပြောသွားတာပါ။ ဒါ့အပြင် ဘယ်လို ခြိမ်းခြောက် ရန်စမှု မျိုးကို မဆို တုန့်ပြန်ဖို့ အသင့်ရှိကြောင်းလည်း ပြောပါတယ်။
တိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားမှာ ကြာသပတေးနေ့က အမေရိကန်စစ်သင်္ဘော၂ စင်း ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ဒါဟာ ဒီလအတွင်း အမေရိကန်က ဒုတိယအကြိမ် ဖြတ်သန်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက တရုတ်က ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲ လေယာဉ်တင်သင်္ဘော Shandong ဦးဆောင်တဲ့ ရေတပ်သင်္ဘော အုပ်စုတစု စေလွှတ်ခဲ့တာပါ။
တိုင်ဝမ်ကို တရုတ်က သူပိုင်နယ်နိမိတ်ထဲမှာ ထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပြီး အမေရိကန်က တိုင်ဝမ်ကို လက်နက်ရောင်းချတာနဲ့ တိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားမှာ စစ်သင်္ဘောတွေမောင်းနှင်တာကို တရုတ်က မကျေနပ်ပဲ ၂ နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးမှာပါ အဆင်မပြေမှုတွေ ဖြစ်လာတာပါ။
Previous Article အိန္ဒိယက လက်နက်ရောင်းချမှုဈေးကွက်သို့ တစ်ဖြည်းဖြည်းချဉ်းနင်းဝင်ရောက်လာနေပြီ ( အာဖရိကအပါအဝင် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံ ၉ နိုင်ငံထိရေးပြီး လက်နယ်ကုန်သည် ဖြစ်လာပြီလား…)
Next Article ရုရှားက ပြင်သစ်ထုတ် အဆင့်မြင့်လေကြောင်းစနစ်များတပ်ဆင်ထားသော Su-30 တိုက်လေယာဉ်များကို ဘီလာရုစ်သို့ပေးပို့